Global Voices teny Malagasy » Afrika: Manolo ny Zava-drehetra ny Fanantenana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Janoary 2019 16:25 GMT 1	 · Mpanoratra Paula Odhiambo Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Afrika Mainty, Ghana, Kenyà, Maraoka, Nizeria, Tanzania, Zimbaboe, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Vehivavy sy Miralenta
Raiso ho ohatra i Favored Girl . Taorian'ny fihatony nandritra ny telo volana, nanaitra ireo mpankafy azy tamin'ny fomba nahafinaritra izy, miaraka aminà fanavaozam-baovao . Manohy mitantara ny A Girl’s Journey Down the Aisle  (Ny Fitsangatsangam-behivavy iray any amin'ny Lalantsara) izy. Toa nivoatra tsikelikely ny bilaoginy, ka lasa Ny Fitsangatsanganam-behivavy iray Ivelan'ny Lalantsara.
Miresaka momba ny fahadisoana tsapan'ny olona momba ilay antsoiny hoe “fahadisoam-panantenana mitaiza” i mystoriesmytestimonies :
Dia ahoana ny momba ny Henatra sy ny Fanarabiana – mety ho ireo ve no sedra ratsy indrindra eto ambonin'ny tany? Toa miteny i The Girl With A Fro  rehefa miresaka momba ireo olana roa ireo fa tsy maninona izany – ny zavatra iombonan'izy roa ireo dia izy samy mankarary.
Manana fahendrena vitsivitsy hozaraina i Believer . Manamarika izy fa tsy tokony hitoetra ela amin'ny zavatra lalovantsika isika – écouteurs, fanoharana sy aretimpo – fa kosa amin'ilay FANANTENANA miharihary izay mitsiry amin'ny fahafantarana Ilay tokana ninoantsika ho Mahatoky:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/13/133671/
 Favored Girl: http://journeydowntheaisle.blogspot.com